आँचल अहिले पनि भन्छिन्, ‘मेरो रियल हिरो पल नै हो’, महानायक कस्लाई मान्छिन् ? (भिडियो हेर्नुस्) – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/आँचल अहिले पनि भन्छिन्, ‘मेरो रियल हिरो पल नै हो’, महानायक कस्लाई मान्छिन् ? (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । नायीका आँचल शर्माको वास्तविक दवाडी हो । तर पनि उनी शर्मा थरवाट चर्चित छन् । उनले एक वर्ष अघि डा उदिप श्रेष्ठसंग विवाह गरेकी छन् । उनको विवाहको समयमा निकै चर्चा भयो । उनले लगाएको लुगा र गहनाको चर्चा भयो भने हेलिकप्टर लिएर रिसेप्सनमा आएको कुराले पनि निकै चर्चा पायो ।
आँचल शर्मा र उनका साथी पल शाहको बारेमा आँचलको विवाह अघि उनीहरुको सम्बन्धलाई लिएर चर्चा गरिन्थ्यो । पल र आँचलको प्रेम रहेको र आँचलले पललाई धोका दिएर उदिपसंग विवाह गरेको सम्मका चर्चा सामाजिक सञ्जालमा भए । तर अहिले ति चर्चा विस्तारै सेलाउँदै गएको छ । एउटै फिल्मवाट काम सुरु गरेका उनीहरुले एक सय भन्दा बढी म्युजिक भिडियो छन् ।
अहिले आँचल फेरी चर्चामा छन् । उनी १० दिनको विपश्यता ध्यानमा गएर फर्केर आएपछि सामाजिक काममा निकै सक्रिय छन् । उनको ब्यवहार र बोल्ने, सोँच्ने शैली पनि परिवर्तन भएको छ । उनले निकै भावुक र दार्शनिक कुरा गर्न थालेकी छन् ।
आफुहरुको सम्बन्ध फरक भएका कारण दुई जनाको फरक फरक ब्यक्तिसंग विवाह भए पनि आँप नाम र जोडी भने संधै रहने उनले बताएकी छन् । धेरै फिल्ममा पलसंग खेलेका कारण दर्शकले मन पराएर बनाइदिनु भएको आँप जोडी संधै रहन्छ, उनले भनिन् यो नामले इतिहास बनाउन सक्छ । तर प्रष्ट हुनुस् हाम्रो प्रेम भने होइन । पलसंगै नाई नभन्नु ल ४ वाट फिल्म खेल्न सुरु गरेकी आँचलले डा उदिप श्रेष्ठसंग विवाह गरेकी छन् ।
प्रविण घटनाले लियो यस्तो मोड, सदिक्षाले भनिन्, ‘अब भने मेरो दाईले न्याय पाउने आश पलाएको छ (भिडियो हेर्नुस्)
दुःखद खबर विरामी बोकेको एम्बुलेन्स दु’र्घ’ट’ना हुँदा एक जनाको मृ’त्यु, दुई घाइते
छिट्टै बिहे गर्दै छन भद्रगोलका बले र टिकटक गल प्रिज्मा, बिहे कहिले ?
मन रू’वाउने घ’टना,जब आफ्नो डेढ महिनाको बच्चा अँगालोमा च्या’पेर आमा रेल्वे ट्र्या’कमा ल’ म्प’ सार परेर सुतिन् त्यसपछि जे भयो….